Fire cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi Bag, Fire Protection Products, Fire cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi Indwangu - Weicheng
I-Weicheng Fire Prevention Technology Group Co, Ltd.yinkampani yamakhemikhali ebandakanyeka ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemishini yokulwa nomlilo kanye nezinto ezibamba umlilo, ngezindawo zokukhiqiza ezivuthiwe nemishini. Le nkampani inomnyango wezobuchwepheshe, umnyango wezokukhiqiza, umnyango wokuhlola ikhwalithi, umnyango wokuphathwa kwamabhizinisi, umnyango wezinsizakalo ngemuva kokuthengisa, umnyango wezokumaketha, umnyango wezokumaketha, umnyango wezimali, umnyango wezabasebenzi. Ngokusebenzisa isitifiketi sohlelo lwe-ISO9001: 2000, uhlelo oluqinile lwekhwalithi luqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokuqina okuphezulu kwemikhiqizo yethu.
Sikholelwa ngokuqinile ukuthi inqobo nje uma kucatshangelwa ikhasimende, ukukholwa okuhle kuyisisekelo, impilo eqotho, iba ngumngani wakho.
Ngokusebenzisa isitifiketi sohlelo lwe-ISO9001: 2000, uhlelo oluqinile lwekhwalithi luqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokuqina okuphezulu kwemikhiqizo yethu.
Indlu yensimbi yasendlini nangaphandle ebanzi evala umlilo, ikhebula elinamathela emlilweni nezinye izinto ezihola phambili zijabulela idumela eliphakeme eChina.
Ekuklanyeni komkhiqizo, ekukhiqizweni nasekuthengiseni, inkampani igcina ifilosofi yebhizinisi "yokwethembeka okugxile nokwethembeka okususelwe"
Kunezinhlobo ezingama-22 ochungechungeni lwe-5 lwemikhiqizo yenkampani yethu.
Ukwenza ngokwezifiso komkhiqizo nokupakisha kungahlangabezana nazo zonke izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ethu.
I-Weicheng Fire Prevention Technology Group Co, Ltd.yinkampani yamakhemikhali ebandakanyeka ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemishini yokulwa nomlilo nezinto zokubuyisela umlilo
1. Yini okufanele ibhekwe lapho uthenga izinto eziguquguqukayo zokufaka izinto online? Ungakwenza kanjani ukukhetha okulungile? Ukuthengwa kwe-inthanethi kwezinto eziguquguqukayo zokuxhuma eziphilayo kusho ukuthi umkhiqizo uthengiwe ...
Ungayikhetha kanjani ipulaki elihle eliguquguqukayo lezinto eziphilayo ...
Njengohlobo olusha lwezinto zokuxhuma, imodyuli ecisha umlilo ngokushesha yathatha ukuphakama kokuyala kwezinto zokuxhuma futhi yaba enye yezintandokazi ezimakethe zezinto zokwakha. Ukuzalwa kokulibala umlilo ...
I-Wei Cheng module yokuvimbela umlilo ukwenza okuphephile ...
Eminyakeni esanda kwedlula, umbuso ubhekele kakhulu ukuvikela umlilo wamaphrojekthi wokwakha, futhi isibalo esikhulu sezinto zokuvikela umlilo sisetshenzisiwe ekwakhiweni kobunjiniyela. Db-a3-c ...
Iphakheji "yokwandisa" evimbela umlilo ...